Review on iPad Camera Connection Kit | My Burmese Blog
Review on iPad Camera Connection Kit	On January 23, 2012	by Htoo Tay Zar	With	2 Comments	- iPad	ဒီနေ့ည ဘာစာရေးရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားရင်းနဲ့ iPad အတွက် apple က ထုတ်ထားတဲ့ iPad camera connection kit အကြောင်း ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးက iPad 1 ထွက်ကတည်းက သူတို့ရောင်းခဲ့တာပါ။ ဒေါ်လာ ၃၀ လောက်ပေးရမယ် အထဲမှာ ခေါင်းလေး ၂ ခုပါပါတယ် တစ်ခုက SD Card reader, နောက်တစ်ခုက USB port အဲဒီ၂ ခုက iPad ရဲ့ 30 pin connector မှာသွားဆက်ရတာပါ။
အဲဒီခေါင်းလေးနဲ့ SD card တွဲဆက်လိုက်တဲ့ အခါ iPad က photo viewer တက်ပါတယ်။ အဲဒီကနေ import လုပ်ယူလို့ ရပါတယ်။ အစက ဒီကောင်လေးဝယ်ရင်ကောင်း ဒါမှမဟုတ် Eye-Fi SD Card ဝယ်ရင်ကောင်းရွေးရခက်နေတာပါ။ Eye-Fi SD Card က အဲဒီ SD card အရွယ်ထဲကနေ wireless နည်းပညာနဲ့ mobile phone, laptop တွေကို အခုရိုက်အခု auto ပို့ စနစ်နဲ့ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာ ဗီဒီယို နမူနာလဲ ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုရှိတာက Canon dslr အမြင့်တွေက CF card တွေဆိုတော့ အဲဒီကတ်နဲ့က ရေရှည်အလုပ်မဖြစ်ပဲ point n shoot လောက်မှာပဲ အလုပ်ဖြစ်မယ့်ပုံ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ Apple ထုတ် connection kit ဝယ်ဖြစ်သွားတာပါ။
iPad camera connection kit က CF ကတ်နဲ့ ချိတ်ချင်ရင် နဲနဲ အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ USB ပေါက်ပေးထားပေမယ့် အဲဒီကောင်မှာ CF card reader usb ခေါင်းသွားတတ်ရင် ကတ်ကို မသိပါဘူး သူပြောတာက external power ပေးဖို့လိုပါတယ်တဲ့။ ဆိုတော့ CF Card သုံးချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ dslr ကင်မရာက A/V digital out (mini usb) ကနေ USB ကြိုးနဲ့ ဆက်ပြီးမှ သုံးရပါတယ်။ ကင်မရာကို ပါဝါဖွင့်ပေးထားရပါတယ်။ အဲဒီလို သုံးရင်ရပါတယ် နောက် ဓာတ်ပုံတွေ import လုပ်ရတာလဲ အခက်အခဲမရှိပါဘူး CF Card (solid state) ကနေ iPad ရဲ့ memory (solid state) ခြင်းကူးတာဆိုတော့ laptop က ဟတ်ဒစ် ဆီကူးတာထက် ပိုမြန်ပါတယ်။
.Jpeg တင်မဟုတ်ပဲ RAW ဖိုင်တွေပါ import လုပ်ပြီးဖတ်နိုင်ပါတယ်။ နောက် HD movie တွေလဲ သွင်းလို့ရတယ် edit လုပ်လို့ ရပါတယ်။ Laptop သယ်ရမယ့် အလုပ်တွေကို iPad လေးနဲ့ သယ်ပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ Photojournalist တွေအတွက် အခုရိုက် အခု iPad နဲ့ တင်လို့ရတာ အားသာချက်ပါတယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ 3G မရှိ Wifi သုံးလဲနှေးတဲ့ အင်တာနက်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ iPad က လက်တွေ သိပ်မဆန်ပါဘူး။ ခုထိလဲ laptop အလေးကြီးသယ်ပြီး ပြေးနေရတုနး်ပဲ။ အမှန်တော့ 3G သာရပြီး မြန်မယ်ဆို iPad camera connection kit ရယ် နောက် Photo Forge2app မှာ IPTC data တွေရေးပြီး အမြန်ပို့နိုင်ရင် သယ်ရတဲ့ ဝိတ်ပေါ့ပြီး အတော်အလုပ်တွင်မှာပါ။ Camera connection kit က အစက usb thumb drive တပ်ရင်လဲ ဖတ်ပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် iOS 4,5ကျမှ ဝယ်လို့လား မသိဘူး ဘာမှမထူးခြားပါဘူး။ Jailbreak လုပ်ထားတဲ့ iPad တွေအတွက်တော့ အခြား hack လုပ်ထားတဲ့ နည်းတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဆိုတော့ ဒီ kit က point n shoot လိုမျိုး entry level dslr မျိုးတွေအတွက် SD card သုံးရင် အဆင်ပြေသလို အခြား CF ကတ်သုံးတွေအတွက်လဲ ကြိုးတစ်ဆင့်ထပ်ခံရတာလွဲရင် အတော်အဆင်ပြေပါတယ်။ ဓာတ်ပုံဝါသနာအိုးတွေအတွက် အဆင်ပြေတယ်ပေါ့. ဟိုလို ကောင်မလေးတွေ self shot ရိုက်ပြီး facebook တင်ချင်တာမျိုးအတွက်တော့ အဆင်မပြေလောက်ဖူး iPad လဲ သယ်ရ point n shoot သယ်ရနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေမယ်။ ကောင်းတာကတော့ အဲဒါမျိုးတင်ချင်တယ် ကွာလတီ သိပ်မလိုဘူးဆို iPhone 4S ကင်မရာမျိုးလောက်နဲ့တင် လုံလောက်ပါတယ်။ မေ့လို့ အခုပြောနေတဲ့ iPad camera connection kit က iPhone, iPod touch တွေနဲ့ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ iPad 1,2နဲ့သာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အခုပြောခဲ့တာက Apple က တရားဝင်ထုတ်တဲ့ဟာပါ အခြား 3rd party ထုတ်တွေက စျေးပိုသက်သာနိုင်ပြီး CF Card တိုက်ရိုက်ရတဲ့ ခေါင်းတွေလဲ တွေ့မိပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာက 3rd party ရောင်းတာမရှိလို့ official ပဲ သုံးဖူးကြောင်းပါခင်ဗျာ… iPad	2 Comments	Ko Paing
Bro, I think there are so many dedicated CF card readers for iPad/iPad II. They will be more comfortable for DSLR users. Here is demo movie; http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CIQc22RoTyg
@Ko Paing ~ Yes bro, I saw those 3rd party CF card reader but bad thing is we can’t buy any 3rd party accessories in Myanmar. That’s why I just bought official one and used with mini USB cable to work with CF cards.
Your email address will not be published. Required fields are marked *	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Captcha *=3+7Notify me of follow-up comments by email. Notify me of new posts by email.	Recent Posts
Buddhist devotees pouring water on tree atapagoda as today is Vesak Day... #Yangon #vesak #vesakha… instagram.com/p/Zr8EHOwI41/2minutes ago
Woolwich killing: meat cleaver, knife and jihadist claims filmed on mobile #UK guardian.co.uk/uk/2013/may/22… 20 hours ago